I-FAQ - Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
I-Mankeel Silver Wings
Amamodeli Abiwe amaningi
I-surfboard kagesi i-W7
I-surfboard kagesi i-W6
Athini amasayizi amathayi amamodeli ahlukene?
Usayizi wesondo le-Mankeel Sliver Wings amathayi enjoloba amakhulu aphefumulayo angu-10-intshi, i-Mankeel Pioneer iyithayi elikhulu lenjoloba eliqinile lama-intshi angu-10, kanti i-Mankeel Steed iyithayi lenjoloba eliqinile elingu-8.5-intshi.
Yiziphi izidingo zabagibeli?
Sincoma ukuthi iminyaka yomgibeli iphakathi kweminyaka eyi-14 nengama-60. Isisindo esiphezulu sebhayisikili lethu ngu-120KG. Ngezizathu zokuphepha, sincoma ukuthi abantu abanesisindo esingaphansi kuka-120KG bagibele. Ukuze uqinisekise ukuphepha kwakho siqu, ungasheshisi noma wehlise isivinini ngobudlova, ngoba umkhawulo wamandla obangelwa isisindo somgibeli, isivinini, kanye ne-gradient ingabangela umgibeli ukuthi aphahlazeke. Kulokhu, umgibeli udinga ukuthwala umthwalo wokusetshenziswa ngokweqile. Izingozi ezengeziwe ezibangelwa izimo.
Yiziphi izinzuzo ze-Mankeel scooters kagesi ngokwesisindo, ukusebenza nokukhuthazela?
Izikuta zikagesi ezintathu ezisanda kwakhiwa zinokusebenza okuhlukile kulezi zici. Ukuze uthole imininingwane, sicela ubheke ku:
I-Mankeel Pioneer: Impilo yebhethri yokushajwa ngakunye ingafinyelela ku-35-40KM. Isisindo esiphelele sale modeli singu-23KG. Ithambekele kakhulu kubagibeli abathanda amandla anamandla. Izinga lokukhuphuka lingafinyelela kuma-degree angama-20. Futhi isilinganiso esingangeni manzi sebhethri elikhiphekayo sifinyelela ku-IP68, kanye nebhethri eliyisipele uhla olukhulu olungafinyelela ku-60-70KM.
I-Mankeel Silver Wings: Impilo yebhethri ifika ku-30-35KM, kanti isisindo se-net yesikuta singu-14kg kuphela. Ingagoqwa kalula futhi iphakanyiswe ngesandla esisodwa. Ilungele kakhulu amantombazane ukugibela. Yiqiniso, umthamo omkhulu wokuthwala umthwalo wale modeli ungafinyelela ku-120KG, ngakho-ke ifaneleka futhi kubagibeli besilisa. Umzimba ubushelelezi, ukwakheka komzimba okufihleke ngokuphelele, ukusebenza kwe-APP, futhi kulula ukuwusebenzisa.
I-Mankeel Steed: Impilo yebhethri ingafinyelela ku-30-35KM, futhi imoto inesisindo esingu-16KG. Yakhelwe futhi yakhiqizwa ngokuhambisana ngokuqinile nezindinganiso zokuphepha zaseJalimane. Ifakwe nembobo yokushaja ye-USB esebenziseka kalula kanye nehhuku yangaphambili. I-front hand brake + irear wheel brake system yamukelwa, eshintshayo futhi elula.
Ingabe umkhawulo wesivinini ungenziwa abagibeli basebenze?
Izilungiselelo zefekthri ezizenzakalelayo ze-Mankeel electric scooters zisethelwe ku-three-speed engaguquki, abasebenzisi bangalungisa isivinini esihlukile ku-APP. kodwa sicela uqiniseke ukuthi ulandela imithetho yezokuphepha yasendaweni ukuze usethe isivinini esihambisanayo.
Ingabe isikuta sikagesi singathathwa esitimeleni, esitimeleni, endizeni (sihlolwe)
Izinqubomgomo zamazwe nezifunda zizohluka, sicela uthintane neziphathimandla zendawo ezifanele kusengaphambili, ngoba ama-scooters kagesi anamabhethri akhelwe ngaphakathi, uma udinga ukuthutha emoyeni, sicela uthintane nemithetho efanele yendiza yasendaweni kusengaphambili.
Kuthiwani ngokusebenza kokuvikela amanzi
Isilinganiso esingangeni manzi se-Mankeel Silver Wings ne-Mankeel yi-IP54. Ukugibela ngaphandle kanye nokugibela isikebhe esimweni sezulu esinemvula akuvunyelwe.
Isilinganiso esingangeni manzi se-Mankeel Pioneer yi-IP55 kanye nesilawuli sebhethri esilinganisa ukungena kwamanzi yi-IP68. Ukugibela ngaphandle kanye nokugwedla emvuleni enkulu akuvunyelwe. Uma kunesidingo, ukugibela ibanga elifushane kuphela ngaphandle emvuleni encane.
Ngesikhathi esifanayo, ngokuphepha kwakho siqu, akukhuthazwa ukugibela ngaphandle kwesinye isimo sezulu esibi nganoma yisiphi isikhathi.
Ngingalanda kuphi uhlelo lokusebenza
Abasebenzisi bangalanda i-Mankeel APP kumanuwali, noma baskene ikhodi ye-QR kuwebhusayithi esemthethweni ye-Mankeelde. Iselula isekela izinguqulo ze-Android ne-IOS. Ungakwazi futhi ukucinga i-Mankeel esitolo se-Apple kanye ne-Google play ukuze ulande i-APP ye-scooter kagesi ye-Mankeel.
Sithini isikhathi sewaranti yesikuta?
Kusukela ngesikhathi lapho i-oda elisemthethweni lisayinwa ngabasebenzisi bomkhiqizo, singanikeza iwaranti yonyaka owodwa ngaphandle uma imoto ilinyazwe ngamabomu.
Sicela ubhekisele kokulandelayo ukuze uthole imigomo nemibandela ethile
1. Umzimba oyinhloko wohlaka lwe-scooter kagesi kanye nesigxobo esikhulu siqinisekisiwe unyaka owodwa
2. Ezinye izingxenye eziyinhloko zifaka izinjini, amabhethri, izilawuli, nezinsimbi. Isikhathi sewaranti yizinyanga eziyisi-6.
3. Ezinye izingxenye ezisebenzayo zihlanganisa amalambu angaphambili/amalambu angemuva, amalambu amabhuleki, indawo yokuhlala yezinsimbi, amafenda, amabhuleki ayimishini, amabhuleki e-electronic, ama-accelerator kagesi, izinsimbi namathayi. Isikhathi sewaranti yizinyanga ezi-3.
4. Ezinye izingxenye zangaphandle ezihlanganisa upende ongaphezulu kohlaka, imicu yokuhlobisa, namaphedi onyawo akufakiwe kusiqinisekiso.
Yini okufanele uyenze uma isikuta sihluleka?
uma kukhona ukungasebenzi kahle kwesikuta, ungabheka futhi ulungise izimpawu ezihambisanayo zamaphutha kumanuwali. Uma ungakwazi ukuxazulula inkinga nokuyilungisa uwedwa, ungaxhumana nabadayisi noma umdayisi oke waxhumana naye ngaphambilini ukuze acutshungulwe.
Ingabe kuphephile ukugibela isikuta sikagesi saseMankeel?
Ama-scooters ka-Mankeel kagesi athobela ngokuphelele izivivinyo zochwepheshe zokusebenzisa okuhlukahlukene kokuphepha ngesikhathi sokuklama nokukhiqiza. I-Ride Mankeel electric scooter iphephile inqobo nje uma ulandela imihlahlandlela yokugibela ephephile kumanuwali wethu womkhiqizo.
Ingabe ngidinga ukushaja amabhethri ngaphambi kokuwasebenzisa?
Yebo, kufanele ushaje amabhethri ngokugcwele ngaphambi kokuwasebenzisa kuqala.
Ingabe ngidinga “ukugqekeza” amabhethri ami?
Yebo, amabhethri azodinga ukuba nomjikelezo "wokugqekezwa" ohlanganisa imijikelezo emithathu yokukhipha ngaphambi kokuthi afinyelele ukusebenza okuphezulu. Lokhu kuhlanganisa ukukhishwa okuphelele okuthathu kanye nokushajwa kabusha okuthathu okuphelele. Ngemva kwalo mjikelezo wokuqala “wokugqekezwa” amabhethri azoba nokusebenza okuphezulu okunokwenzeka kanye nokuguquguquka okuncane kwamandla kalayini ngaphansi komthwalo.
Amabhethri azobamba amandla awo kuze kube nini?
Wonke amabhethri azozikhipha ngokwawo uma engasebenzi. Izinga lokuzikhipha ngokwalo lincike ekushiseni lapho zigcinwa khona. Izinga lokushisa elibanda kakhulu noma elishisayo lizokhipha amabhethri ngokushesha kunokujwayelekile. Ngokufanelekile amabhethri kufanele abe
agcinwe ekamelweni lokushisa.
Iyini impahla yomzimba we-scooter?
Umgogodla womzimba wenziwe nge-aerospace aluminium alloy nokusebenza okuhle kakhulu kanye nekhwalithi.
Hlobo luni lwesondo imodeli ye-Mankeel Silver Wings? Ingabe kulula ukufutha?
I-Mankeel Silver Wings ingamathayi erabha aphefumulayo angu-10-intshi, okuyinto evamile emigodini yokwehla kwamandla emali yamabhayisikili esivame ukuwasebenzisa. Ngaphezu kwalokho, sizokunikeza ishubhu elinwetshiwe le-inflation nozzle ukwenza kube lula kuwe ukuthi ufuthele amathayi.
Ingabe izinga lokushisa linomthelela ekugibeleni?
Uma izinga lokushisa lendawo yokugibela lidlula ibanga elimakwe kumanuwali, lingabangela ukulimala kwesondo noma okunye ukwehluleka ukusebenza. Sicela uqiniseke ukuthi ulandela izincomo kumanuwali womkhiqizo wethu ukuze ugweme izinkinga zokuphepha ezingadingekile.
Ingabe ibhethri liyakhipheka?
Ibhethri le-Mankeel Pioneer liyakhipheka futhi liyashintshwa. Amanye amamodeli we-Mankeel scooters kagesi awakusekeli ukuqaqa. Uma zihlakazwa ngaphandle kokugunyazwa, ukusebenza kwe-scooter kagesi kuzolimala.
Kungani izibani zicisha ngokuzenzakalelayo
Lokhu okokuvikela ukuvula nokukhohlwa ukucisha nokuphelelwa amandla. Ngenxa yokonga amandla, siklame isikuta ukuthi sivale ngokuzenzekelayo ngemva kwesikhathi esithile ngaphandle kokusebenza. Uma ungafuni lesi silungiselelo, ungasishintsha ku-APP ukuze sivale ngokuzenzakalelayo ngemva kwesikhathi eside noma uvale lo msebenzi ngokuqondile.
Uma ngifuna ukuthenga izesekeli ezihlobene, ngingazithenga kuphi
Ungakhetha ukuthenga kunkundla yokuthengisa yenkampani yangaphandle esetshenziswa ngokusemthethweni nguMankeel noma uthintane nensizakalo yethu yamakhasimende okuthengisa ukuze uyithenge.
Singakwazi yini ukuba umthengisi womkhiqizo we-Mankeel noma umsabalalisi?
Kunjalo, manje sesiqasha abasabalalisi bomhlaba kanye nama-ejenti wemikhiqizo. Siyakwamukela ku xhumana nathi ukuze xoxa isivumelwano se-ejensi, izimfuneko zokubambisana nemininingwane yezomthetho.
Iluphi usizo uMankeel alunikeza abasabalalisi nama-ejenti?
UMankeel unethimba lochwepheshe labasebenzi abangu-135, abangakunikeza ngokusekelwa okuphelele okulandelayo:
1. Intengo nokuvikelwa kwemakethe
I-Mankeel inesethi yamazinga aphusile, afanelekile futhi asobala okukhethwa nokubambisana kwabasabalalisi. Abasabalalisi abahlangabezana nezindinganiso zethu zokuhlola zangaphambili kuphela abangamela izinhlobo zemikhiqizo yethu. Uma ukubambisana kokusabalalisa umkhiqizo sekuqinisekisiwe, noma ngokwentengo yomkhiqizo noma ukunikezwa komkhiqizo, sizolandela ngokuqinile imigomo yokubambisana ukuze sivikele futhi sisekele amalungelo nezintshisekelo zakho endaweni lapho usakaza khona.
2. Isevisi yangemuva kokuthengisa kanye nesevisi yangemva kokuthengisa, isiqinisekiso sokufaneleka kokulethwa kwezinto
Senze izindawo zokugcina izimpahla ezi-4 ezihlukene zaphesheya kanye nezindawo zokulungisa ngemuva kokuthengisa e-United States naseYurophu, ezingamboza ukuhanjiswa nokusabalalisa e-Europe nase-United States. Ngasikhathi sinye, singakunikeza nensizakalo yokudedela umkhumbi, ukukongela ukugcinwa kwezinto kanye nokuthengiswa kwangemva kokuthengisa Izindleko zesevisi.
3. Umfelandawonye wokumaketha ojwayelekile, ukwabelana ngezinsizakusebenza
Mayelana nokukhuthazwa komkhiqizo nomkhiqizo nokumaketha, sizokwabelana ngokungagodli ngezithombe zomkhiqizo, amavidiyo omkhiqizo, izinsiza zokumaketha, nezinhlelo zokuthuthukisa ukumaketha esinazo, ukuze sabelane ngezindleko zakho zokumaketha, futhi sikwenzele ukuphromotha okukhokhelwayo. futhi Sethule amakhasimende kuwena ukuze nenze umkhiqizo kanye nokukhushulwa komkhiqizo ndawonye ukuze wandise ithonya lakho futhi usize ukugeleza kwamakhasimende akho.
Injani idethi yakho yokulethwa?
Sinezindlela ezimbili zokuletha
1, iMankeel njengamanje inezindawo zokugcina ezingu-4 e-USA/Germany/Poland/UK ezingamboza yonke indawo yase-USA naseYurophu, iqinisekisa ukuqeda ukuthunyelwa phakathi kwamahora angu-8, futhi ibuyekeze inombolo yokulandelela phakathi namahora angu-24. Kumodeli yomkhiqizo ngamunye, sizolungiselela amayunithi angu-1,800 ukuphendula ku-oda lakho eliphuthumayo.
I-2, Futhi, Uma ufuna ukuthumela izimpahla ezivela embonini yethu, sizolungisa izimpahla ngesikhathi ngokusho kwe-oda lakho futhi siqinisekise ukulethwa nawe, khona-ke sizokukhiqiza futhi sikulethele ngesikhathi esimisiwe.
Kuthiwani ngokupakishwa komkhiqizo kaMankee?
UMankeel usebenzisa igwebu + ikhathoni + eligoqayo elihambisana nemvelo, futhi uphumelele ukuhlolwa kokwehla endaweni okungenani engu-175cm. Kuqinisekisiwe ukuthi ngeke konakale ngesikhathi sokuthutha, futhi imikhiqizo elethwa kuwe iphelele futhi misha sha.
Kuthiwani uma izimfundamakhwela zingakwazi ukusebenzisa isikuta sakho sikagesi?
I-Mankeel inemiyalelo yephepha namavidiyo azokufundisa indlela yokuyisebenzisa. Uma uthola entshai-mankeel scooter kagesi, sicela ufunde okuqukethwe okufanele kwebhukwana lomsebenzisi ephaketheni ngokucophelela ukuze uqinisekise ukuthi ungakuqonda ngokugcwele ukusetshenziswa kwethu isikuta sikagesi. Ngaphezu kwalokho, kunemihlahlandlela yokugibela ephephile enemininingwane encwadini yomsebenzisi ezokutshela ukuthi ugibele eyethuisikuta sikagesi iphephilely kanye dimithetho ehlanganisiwe yama-scooters kagesi.
I-Mankeel Pioneer(Imodeli yangasese)
UMankeel Pioneer(Imodeli eyabiwe)
Amanye amamodeli abiwe
I-Mankeel scooter kagesi APP
I-IOS / Android
Ucingo: 86 - 0755 - 23005256
Umakhalekhukhwini: 86 -153 0260 5004
Imeyili: sales@mankeel.com Imeyili: support@mankeel.com
Ikheli: 515-516, 5th floor, Building A, Country Garden Fenghuang Zhigu, No.50, Tiezai Road, Bao 'an District, Shenzhen, China.
© Copyright 2021. I-Shenzhen Manke Technology Co., Ltd. kanye/noma izinhlaka zayo. Wonke Amalungelo Agodliwe